DRD350 Meat Droit Dicer manapaka cubes fromazy
Izy io dia afaka manodina hena mangatsiaka ho an'ny silaka, cubes, strip, miaraka amin'ny fahombiazany avo ary 80% yieldrate. Rehefa ny fromazy eo anelanelan'ny -10 sy -5 degre Celsius., Mandamina ny fromazy izahay. Izahay dia manapaka ny fromazy amin'ny haben'ny 5 * 5mm sy 10 * 10mm, 2 * 5 * 10mm, ary tena tsara izany! ...
Ny masininay dia ampiharina amin'ny indostrian'ny fanodinana hena, ny sakafo wheaten ary ny indostrian'ny fanodinana sakafo malaky. Ny vokatra lehibe indrindra dia ny Dester Fatin-kena Frozen telo heny, ny fanapahana lovia haingam-pandeha, ny Smokehouse, ny vata fampangatsiahana vacuum, ny mixer vacuum Flour, ny lozika fanodinana noodle, Shaomai-mak ...
Hebei ChengYe Intelligent Technology Co., Ltd. (Code Equity: 838358) dia natsangana tamin'ny 2007. Any amin'ny faritra ara-toekarena sy ara-teknika, Shijiazhuang City, faritanin'i Hebei, ny orinasanay dia manokana amin'ny fikarohana sy famokarana milina fanodinana sakafo ary fitaovana tsy mahazatra. Ny orinasanay dia ...